Surfer inoita yekudzivirira mvura bvunzo kune iPhone 7 uye 7 Plus | IPhone nhau
Nguva Apple inogadzira zviyero zvine mwero zvekudzivirira mvura kweiyo nyowani iPhone 7 uye iPhone 7 Plus, izvo zvavanofunga kuti hazvichadi kupfuura kuchovha bhasikoro mumvura, asi izvi hazvina kumisa vanhu kumhanya nemimwe miedzo yakanyanyisa ine mhando nyowani dze iPhone.
Mavhidhiyo akasiyana siyana akaburitswa uko iyo nyowani iPhone inopona kunyudzwa mumvura, zvinwiwa uye kofi, kunyangwe ichikandwa mumamita gumi emvura. Nemuedzo uyu wekupedzisira surfer anozivikanwa, Kai Lenny, akatora iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus ndokuenda kumasaisai kuyedza kuramba kwavo kwemvura apo uchiita waunofarira mutambo wakanyanyisa.
Vhidhiyo inotanga nekuyedza iyo iPhone 6s uye iPhone 6s Plus, izvo sezvingatarisirwa hazvirarame kwenguva refu, zvese zvishandiso zvinomira kushanda mushure memaminitsi mashanu sezvo Kai anotanga kufambisa.
El iPhone 7, zvisinei, ichiri kushanda zvakaringana mushure memaminetsi makumi matatu kuvhura. Iyo iPhone 7 Plus haina kukunda muyedzo zvakanyatsonaka, mushure mekunge Kai abuda mumvura iye anoona kuti odhiyo yakakuvara zvakanyanya mushure mekufamba kwakafanana kwemaminetsi makumi matatu.
Nenzira Kuongorora ndechimwe chezviitiko zvakateedzana izvo Apple zvinonyatso kupa zano pamusoro pekuita neiyo iPhone, saka zvirinani kuti iwe usaite mutambo uyu ne iPhone yako nyowani.
Pamutemo Apple inoratidza kuti muganho wekudzivirira mvura i1 mita yekunyudza mumvura yakadzikama kwemaminitsi makumi matatu. Rangarira kuti kukuvadzwa kwemvura kuchishandiso haina kunyatso kufukidzwa newarandi.
“IPhone 7 ne iPhone 7 Plus imvura, guruva uye zvinopisa nemushonga uye zvakaedzwa pasi pemamiriro ezvinhu erabhoritari zvine mwero weIP67 pasi peIEC standard 60529. Kupaza, mvura uye guruva kuramba hakusi kwechigarire mamiriro uye kuramba kunogona kudzikira nekuda kwekushandisa kwese. Usaedze kubhadharisa yakanyorova iPhone, ona iro gwaro revashandisi rekuchenesa uye kuomesa rairo. Kukanganiswa kwemvura hakuna kuvharwa pasi pewarandi.
Asi hei, heino vhidhiyo apo iyo iPhone 7 ndiyo inokunda mukumira kwemvura mukufambisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Nyanzvi surfer inoita yekudzivirira mvura bvunzo pa iPhone 7 uye 7 Plus
Asi kudiwa kupi kwaivepo kwekupwanya mbiri iPhones 6s? Kana isu tese tichiziva kuti hazvisi pamutemo mvura ... Zvakawanda sei zvisina maturo uye kuti zvishoma sei isu tinokoshesa zvinhu.
verenga musoro wenyaya zvekare enda ………
Zvakanaka, ine iPhone ini handisi kuona ako mavhidhiyo, ivo vanotanga uye mushure memasekonzi 4 inodambura.
Zvinoitika kune mumwe munhu
Zvakaitika pane ino peji kwemakore akati wandei: Vhidhiyo haigone kutambwa
Flying Slime, yemahara kwenguva shoma